06/03/2018 - Page 2 sur 4 -
EPP dimy sy CEG Tsaratanàna : Nakatona vokatry ny asan-dahalo sy ambalavelona
Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny distrikan’i Tsaratanàna. Tsy mifidy izay harapaka intsony ireo dahalo fa hatramin’ireo sekoly aza dia lasibatra avokoa. Vokany, EPP dimy: Antsirasira, Andakana, Ampasindava, Ambovomavo ary ny Ecole Communautaire Ambohimiarina …Tohiny
Takaitran’i Dumazile : Ahiana ny fiakaran’ny rano amin’ny faritra maro
Omaly tamin’ny 08 ora maraina dia tany amin’ny 270km Atsimo atsinanan’i Mahanoro no nisy ny foiben’ny rivodoza Dumazile, izay arahina tafiotra 220 km isan’ora. Manalavitra miandalana ny morontsiraka i Madagasikara amin’ny hafainganam-pandeha 20 km isan’ora …Tohiny
AMBATOFOTSY : Polisy nifamono tao anaty Karaoke
Polisy roalahy izay voalaza fa nifamaly sy nanakorontana tao amin’ny toerana fanaovana “karaoke” iray teny akaikin’ny tetezan’Ambatofotsy no nosamborin’ny zandary ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany hariva. Asa izay tsy …Tohiny
Alasora : Miaramila hita faty
Miaramilan’ny RTS iray, mitondra ny grady “Sergent Chef”, izay voalaza fa nanjavona nanomboka ny alarobia 28 janoary lasa teo no hita faty teny Alasora Ambohijanaka omaly. Tsy hita teny aminy intsony ny vola mitentina 12 …Tohiny